Faritra Androy : Fitsidihana sy fanolorana mari-panofanana sy fampitaovana ireo ivon-toeram-panofanana – METFP
➡️Anisan’ireo ivontoeram-panofanana zandriny indrindra ao amin’ny faritra Androy ny LTP Tsihombe, satria ny taona 2018 no nanokafana izany.
Ahitana seha-piofanana roa (02) ity Lysea ity dia ny « Génie Civil » sy ny « Gestion » izay samy maharitra telo (03) taona ; ka miisa enimpolo (60) ny mpiofana ao.
⏩Misedra olana ny ivontoeram-panofanana, satria dia efitrano roa (02) monja sy « atelier » iray (01) no mandrafitra ny LTP Tsihombe, ankoatra ny tsy fahampian’ny fitaovana, kanefa dia azo lazaina mamokatra tanora mendrika.
📌Nandritra ny fitsidihana ny faritra Androy, dia tsy hadinon-dRamatoa Minisitry ny Fampianarana Teknika sy ny Fanofanana arak’Asa, Ramatoa VAVITSARA Rahantanirina Gabriella, ny nijery sy nihaino ny olana manjo ny ivontoeram-panofanana, ka nitondrany fampitaovana ny LTP Tsihombe ho an’ireo seham-piofanana misy ao.
Hojerena manokana ihany koa ny fandraisana ireo mpandraharaha sy mpampiofana ho mpiasam-panjakana, ankoatra ny fanampiana ireo efitrano fianarana.
✅Nasiany tsindrim-peo manokana ny ady amin’ny kolikoly ara-nofo eny anivon’ny toeram-piofanana : « Aoka isika ho fitaratra amin’ny fitondran-tena satria asa masina ny asa fanabeazana », hoy izy.
✅Nandritra izany fotoana izany koa no nanararaotany nanao ny fitsidihana ny CFPR Tsihombe ka nanolotra mari-panofanana ho an’ireo tanora nisitraka fanofanana tamin’ny sehatry ny hainahandro, tao-trano, informatika, ary ny tao-zaitra.
©️ SCOM METFP/Mai 2022